PE Marine Pedal Extrusion Line - Mpamatsy tsipika fampidiran-tsolika China PE Marine, Factory –Jwell
Ny fitaovana plastika ampiasaina amin'ny rafitry ny jono plastika dia natao manokana ho an'ny fiompiana an-dranomasina. Izy io dia fitaovana matanjaka manohitra ny fahanterana sy anti-ultraviolet. Mila manampy anti-antitra, anti-oxidation, anti-ultraviolet ary additives manokana hafa. Amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina mihoatra ny 10 taona tsy misy olana. Ny lakandrano manjono plastika vaovao dia afaka manohitra ny fanafihan'ny rivo-doza mahery ary izy izao no fitaovana mety indrindra amin'ny fiompiana an-dranomasina any an-tanàn-dehibe.